Sababii waldhabbii daangaa naannolee lameenirraa kan ka’e, – Kichuu
HomeAfaan OromooSababii waldhabbii daangaa naannolee lameenirraa kan ka’e,
Sababii waldhabbii daangaa naannolee lameenirraa kan ka’e,
Sababii waldhabbii daangaa naannolee lameenirraa kan ka’e, riifarandamiin irra deebiin hin gaggeeffamu-Obbo Addisuu Araggaa
(Fana bc) –Finfinnee, Amajjii 27,2009(FBC) –Sababii waldhabbii daangaa naannolee lameenirraa kan ka’e, riifarandamiin irra deebiin gaggeeffamuuf deema kan jedhu oduu dharaa akka ta’e, itti gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa himan.
Aanaalee daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee Ityoophiyaarratti waldhabbii uumame hiikuuf mootummoonni naannolee lameenii mootummaa federaalaa waliin ta’uun furmaata waaraaf hojjechaa akka jiran itti gaafatamtichi eeraniiru.
Yeroo ammaas nagaa fi tasgabbiin akka uumamuu danda’e obbo Addisuun himaniiru.
Rakkoon uumamee tures waldhabbii uummata obboleeyyan lameenii yookan kan mootummoota naannolee lameenii jidduutti uumame osoo hin taane, ilaalcha maxxantummaan guutamanii caasaalee mootummaa keessa qaamolee jiraniin kan mudate akka ta’e mootummaan irra ga’eera.
Mootummoonni naannolee lamiinii kaayyoo walfakkaataa kan qaban yammuu ta’u, ummannis waldhabbiiwwan isaanii karaa nagayaatin hiikkachuuf aadaa boonsaa akka qaban obbo Addisuun yaadachiisanii, ummatichi ummata walirraa dhalee hiddaan walitti hidhame jedhan.
Kanaan boodas qaamolee nagaa ummataa booressanii fi miidhaa qaqqabsiisuuf socho’anirratti, koomaandi poostiin labsii ariifachiisaa tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatu himaniiru.
Riifarandamii bifa haaradhaan gaggeessufi jedhamee kan haasa’ames, olola sobaa akka ta’e obbo Addisuun Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaniiru.
Daangaa naannolee lameenii ilaalchisee murtoon ummataa bara 1997 gaggeeffames kan eegame akka ta’e itti gaafatamaan Biiroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Oromiyaa himaniiru.
Murtoo ummataatin gandoonni muraasni kan bara 1997 hin daangofne, akka daangeffamanis ni hojjetamas jedhan obbo Addisuun.
Rifarandamiin akka hin godhamne diduun keessan waan gaariidha. Nagaafi tasgabbiin deebi’e jechuun garuu soba. Guyyaa kaleessaafi har’aa qofaawuu Liiyyu Poolisiin Godina Baalee Aaanaa Sawwaanee weeraruuf yaalii gooteen lolli guddaan godhamaa jira. Harargee Bahaa Aanaa Cinaaqsan keessaa araddoota 6 akkuma qabattetti jirti. Mayyuu Mulluqqeettis daangaa ceetee keellaa dhaabuun ummata saamaa jirti.
Horror in South Africa:Nearly100 mentally ill patients died of starvation,
Sagantaan ”TV Gaaddisa Dhugaa” Karaa TV ONN Qilleensa Irraan Darbuuf